कुलमानको बहिर्गमनपछि लाइन जाने क्रम बढेको हो ? के हो वास्तविकता ? – Rapti Khabar
प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका अनुसार अहिले पिक आवर (विहान र साँझ)मा १२२५ देखि १२५० मेगावाटसम्म विद्युत माग छ । पिक आवरमा प्राधिकरणका आयोजनाबाट ५०० मेगावाट र करिब ५५० मेवा निजी जलविद्युत कम्पनीबाट लिइन्छ । अपुग हुने १०० देखि १८० मेगावाट भारतबाट आयात गरिन्छ । अहिलेको पिक आवरमा करिब १४०० सय मेगावाट बिजुली माग हुने प्रक्षेपण थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण उद्योग, होटल, सिनेमा हल लगायतबाट हुने माग घटेकाले माग प्रक्षेपण भन्दा निकै तल छ । अनलाइखबरबाट साभार
काठमाडौं, असोज २५ तपाईं दसैंमा खसी किन्न कहाँ जानुहुन्छ? कलंकीको खसी बजार? टुकुचाको बजार? कि घर नजिकैको चोक? अब यस्तो झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको डरले अधिकांश मानिस घरबाट निस्कन डराइरहेको अवस्थामा श्रीराम ग्रुप अन्तर्गतको अनलाइन खसी डटकमले ग्राहकको घरमै जिउँदो खसी पुर्याउने सुविधा ल्याएको छ। दसैं लक्षित यो सेवा काठमाडौं, ललितपुर […]
भदौ २८, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षणका लागि गरिने पीसीआरको शुल्क घटाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबारबाट लागू हुनेगरी सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क दुई हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । सुरुमा सरकारले ५५ सय रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ १४ गते ११ […]